Izitayela zezinwele ezi-31 ezihamba phambili zezinwele zemvelo - Ubuhle
Izitayela zezinwele ezi-31 eziPholile ozozama ukuzizamela kulo nyaka
Nakhu okumele ukwenze isithombe-skrini ekuqokweni kwakho izinwele okulandelayo.
Njengoba ubusika busondele, sekuyisikhathi sokuqala ukucabanga ngezinwele zokuzivikela ezizogcina izinwele zakho zinamanzi futhi zinakekelwa kahle njengoba isikhathi siqhubeka nokwehla. Isimo sezulu esibandayo singasomisa ikakhulukazi izinwele ezilungisiwe, njengoba umoya udambisa ukink nama-curls ethu futhi uholele ekuphukeni. Kungakho izitayela zokuzivikela ezinjengama-box braids, ama-twist aseSenegal, kanye Amanye amagoda zibaluleke kakhulu.
Akuzona nje kuphela izindlela ezizamekile neziyiqiniso zokugcina izinwele zethu zemvelo; kumnandi futhi okusobala. Zingashintshwa kalula ukwengeza ubude, noma ungaxuba ngemibala ehlukene nemidwebo ukushintsha ukubukeka kwakho. Izinwele zethu zingenza noma yini ngokweqiniso. Kepha ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo ngesitayela sakho esilandelayo, qiniseka ukuthi uyazi izisekelo.
Izitayela zokuvikela zivikela kanjani izinwele zemvelo?
Ngamafuphi, izitayela zokuvikela zisiza ukugcina izinwele ezilungisiwe ziphilile ngokunciphisa ukutholakala kwazo kunoma yimuphi umonakalo odalwe yilanga, ukushisa, amakhaza, noma ukweqisa ngokweqile. Ama-curls emvelo — ikakhulukazi amakhoyili wohlobo lwe-4 — asevele omile futhi athambekele ekwephukeni, ngakho-ke isitayela esihle sokuvikela singasiza izinwele zakho ukugcina umswakama futhi zisize ukuthi zikhule ngokushesha. Noma kunjalo, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi izinwele zakho zemvelo zisesimweni esihle ngaphambi kokuthola isitayela sokuzivikela, kusho UChristiana Cassell , isitayela sokuloba eLos Angeles: Kungcono ukusika noma ukunquma kahle ngaphambi kokuluka ukuze izinwele zakho zikwazi ukumelana nokuba nengxabano.
Lapho usuzinzile ekubukekeni kwakho, uzofuna ukukhumbula ukungezwani kwesikhumba futhi uqinisekise ukuthi isisekelo asiqinanga kakhulu, kusho Ikhamera Brown , uchwepheshe we-crochet-braids: Uma kungenjalo kungaholela ekubambeni i-alopecia, ikhanda, kanye nobuhlungu besikhumba. Ngenkathi abaningi bethu bekhula bekholelwa ukuthi ubuhlungu yigama lomdlalo uma kukhulunywa ngokufakwa kwama-braids, manje sesiyazi ukuthi ukuqina okusobala kungakwazi imbangela ukulahleka kwezinwele — okuphambene ngqo nalokho okufunayo lapho ukhetha isitayela esivikelayo.
indlela yokukhulisa izinwele ngokushesha ngenyanga
Iyiphi indlela engcono yokugcina izitayela zokuvikela?
Ukugcina isitayela sakho sokuzivikela sibukeka simnandi njengoba besenza ngenkathi ushiya i-salon, enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi ugqoka i- ibhonethi kasilika noma isikhafu ebusuku. Ngokungafani nokotini, usilika usiza izinwele zakho zigcine umswakama futhi uqede i-frizz, ezokusiza ukunweba ukugqama kokubukeka kwakho. Kalula nje: 'Uma ungalali nebhonethi ebusuku, ungalindeli ukuthi isitayela sakho sezinwele singahlala izinyanga ezimbili, kusho UHelena Koudou , umsunguli we Kubulawe ngama-Braids.
UKoudou futhi uncoma ukufaka uwoyela wezinwele esimisweni sakho ukuvimbela ukoma. Iseluleko sami ukuthi ugcobe uwoyela ngqo ekhanda lakho nasemiphethweni yakho bese uzinika ukubhucungwa okuhle kwekhanda lasekhanda lemizuzu emithathu, 'usho kanje. Yenza lokhu okungenani kabili ngeviki futhi isikhumba sakho sezinwele sizokubonga ngokuhamba kwesikhathi. Nakanjani, uzoqala ukuqaphela ama-braids akho okuvikela abukeka ebushelelezi ngemuva kwamasonto ambalwa, noma ngabe ukhuthele ukugoqa kwakho ebusuku. Ukubuyisa isitayela sakho, uKoudou uphakamisa ukubamba imousse ethile. Intandokazi yakhe? IVigorol Mousse Olive Oil Mega Moisture .
Kufanele uzigcine isikhathi esingakanani izitayela zokuvikela?
Awukho umthetho oqinile wokuthi izitayela zezinwele zokuzivikela kufanele zihlale isikhathi esingakanani, kepha ngokusho kukaKoudou, izitayela ezinezandiso ezinjengama-braids ebhokisi elingenalutho ngokuvamile zingahlala ezinyangeni ezimbili, kuyilapho uzofuna ukukhipha ummbila wakho wokuphakela ngemuva isonto. Zigqoke futhi, futhi ubeka engozini ukomisa izinwele zakho futhi unciphise ukukhula kwazo.
Izindaba ezinhle ukuthi ungenza izitayela zokubuyela emuva-vele uzame ukuhlela ama-trim njalo emavikini ayisithupha uma ukwazi. UBrown uncoma ukushintshanisa okwehlukile: Ngibona kungcono ukuzama isitayela esifana nama-braids ebhokisi, ngisebenzisa izandiso, bese ngishintshela kwisitayela esilula njengokuluka noma ukusonta izinwele zakho zemvelo. ' Yize bobabili bezovikela izinwele zakho zemvelo, babeka izinhlobo ezahlukahlukene kuzo, usho kanjalo.
Unakho konke lokho? Skrolela kuzinwele zethu zokuzivikela esizithandayo zango-2020. Ukuzithanda kulula. Ukukhetha ozokugqoka ngokulandelayo? Ngikufisela inhlanhla.
I-Instagram / @ciara 1/31
Kunesizathu sokuthi ama-braids ebhokisi angenye yezitayela zokuvikela ezithandwa kakhulu — kulula ukuzinakekela, yebo, kodwa futhi zinokuguquguquka okukhulu kakhulu, okusho ukuthi akudingeki zibe yisicefe. Enye indlela yokwenza lokho? Khulisa idrama ngokuyihlukanisa ngezigaba ezinkulu, eziqondakalayo futhi ezonga isikhathi sokuluka futhi igcine ukunakekelwa kube okungenani.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 2/31
Ama-Braids we-Knotless Box
Ukubheka okukodwa kulawa mabhokisi angenalutho, futhi akunzima ukubona ukuthi kungani le nqubo iqhume eminyakeni embalwa edlule. Ngoba ama-braiders aqala ngezinwele zakho zemvelo (esikhundleni sokungeza izandiso empandeni), ayidaleli ukungezwani okuningi ekhanda lakho, ngakho-ke kunethezekile ngamathuba amancane okuphuka. Kukhona nokubonga okuhle okungeziwe kwisitayela semali yamafindo, esidala ukubukeka okungenamthungo.
I-Instagram / @syabongampungos 3/31
AmaFulani aluka ubuhlalu
USolange uthathe ama-braids akhe amaFulani amyisa kwelinye izinga ngobuhlalu obuthatha cishe bonke ubude. Thatha inkomba yesitayela kusuka kusithonjana bese uqondanisa izesekeli zakho (njenge-mask yakho oyithandayo) kuma-braids akho ngokubukeka okunesibindi nokuzayo. Ukuduthuka akulona ngisho igama.
I-Instagram / @iamaraxilindsey 4/31
Enye yamathrendi amakhulu we-2020? Ukungeza izinto ezifana nobuhlalu, indwangu, noma ubucwebe kuma-braids akho noma ezindaweni ze-faux, kusho U-Araxi Lindsey , isitayela sazo zonke izinwele zemvelo ezinhle ziyabukeka Umnyama-ish. Lapha uphinde wadala ubhasikidi oyisisekelo ontambo ezintathu okungekho ngaphandle kwalokho.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 5/31
Thatha ama-braids akho ezindaweni eziphakeme ngawo le regal updo , eyenziwe nguKoudou. Kukhuthazwe ubukhosi baseYoruba, isitayela esingagcini nje ngokubangela ukuthi ume ngokwesaba, kepha futhi sihlonipha okhokho kudala ngaphambi kwethu abathuthukisa amaphethini ayinkimbinkimbi futhi amasha wokunakekela izingidi zabo zemvelo.
Izithombe ze-Getty 6/31
I-Faux Fishtail Braid
Yonke iminyango yama-faux ayenziwanga alinganayo, kanti uTracee Ellis Ross wenyuka nobude nokuthungwa ngale nsimbi ye-fishtail. Ukuze wenze izinwele zakho zibukeke futhi zicwebezele ngokwengeziwe, zama ukufaka i-pomade yezinwele efana Indodakazi kaCarol Mimosa Uju Lwezinwele . Izoshelela kalula amaflaya endiza ngenkathi yenza izinwele zakho zibukeke zikhazimula.
I-Instagram / @gabunion 7/31
Amakhoneni anePony Faux
Ukubopha amakholidi kubuyela kuponi lefoni kukunikeza okuhle kunakho konke imihlaba: isitayela esiyinkimbinkimbi nevolumu ephezulu. Uma ubukade ufuna ukuzama umbala, ungawufaka emakhoneni noma vele ungeze iponi elikhanyayo ukudala umphumela wokuvimba umbala. Noma iyiphi indlela iqinisekisiwe ukuthi ibukeka iyinhle.
I-Instagram / India Uthando 8/31
Faka isendlalelo sobukhulu bombhalo ku- Amanye amagoda ngezinwele zezingane ezichaziwe. Ubuhle bala ma-braids ukuthi ngezinketho eziningi zokuhlukanisa ongakhetha kuzo — ama-braids agqagqene, ubujamo be-geometric — ungabuyela njalo kulokhu kubukeka okuvikelayo ukuthola ukukhanya okungaguquki futhi ungazizwa ungasasebenzi.
Izithombe ze-Getty 9/31
Enye indlela enhle yokufaka i-spin epholile kuma-braids ebhokisi noma ama-faux locs kuhlanganisa ukwakheka namaphethini we-curl nezinwele ezandisiwe, kusho uBrown. Uma ubheka phezulu, ungangeza nangemibala ehlukile (ungesabi ukuqhathanisa) ukuthola isibuyekezo kulesi sitayela sokuzivikela sakudala.
I-Instagram / @mzokoloko 10/31
Amafindo Wantu Bantu
Lawa mafindo wabantu ayingxube ephelele yokudlala ne-chic, ngenxa yezingxenye ezigobile nama-chunky, amafindo alukiwe. Lesi yisibonelo esivelele sokuthi ukushintsha ukuhlukana kwakho kungavuselela kanjani i-classic evivinyiwe neqiniso.
I-Instagram / @syabongampungos 11/31
Lokhu kukhonjiwe okusanhlamvu kubukeka ngosaziwayo wezithombe USusy Oludele futhi U-Aeon Elliott ikude kakhulu namakhonela akho ajwayelekile aqonde ngqo emuva. Iphethini ye-curl iyindlela emnandi nenhle yokushintsha isitayela sokuvikela, futhi okuvelele okubomvu kungeza inani elifanele le-pop.
Izithombe ze-Getty 12/31
I-Faux Three-Strand Braid
U-Yara Shahidi ukhombisile hhayi eyodwa kepha ngama-braids amaningana amathathu aqoshwe nge-accessory yegolide entekenteke. Lesi sitayela silungele labo abafuna okuthile okuhlukile kepha hhayi i-avant-garde kakhulu. Ukubukeka okuguquguqukayo nakho kungashintshwa kalula kubuningi obuphezulu ngokuya ngemizwa yakho. Ilula futhi iyamangalisa.
Abanye bakhetha ukubukeka okungaphezulu kwe-boho kwezindawo zonkulunkulukazi uma kuqhathaniswa nezindawo ezingamanga. Imikhawulo ayivuliwe futhi kuyadingeka ukunwetshwa kwezinwele ezisilika. Ukukhetha izinwele zemvelo kunokuzenzela ukufeza i-sheen yokugcina nakho kuyindlela. Ungenza ngezifiso ngobuhlalu, amagobolondo, kanye nezinduku ukwenza lokhu kubukeke kungumusa.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 14/31
UKoudou ukhuthazwe nguBeyoncé Ingonyama King obomvu-ukhaphethi lapho edala la magagasi eminwe abukhali. Imvamisa amagagasi omunwe aphelela ku-nape; kodwa-ke, isandiso esingeziwe sinikeza ubude kanye nenketho yokukuvumela ukuthi kudlule phezu kwehlombe lakho noma ukugoqa iponi eliphansi noma ibhan. Thina uthando ukwenza izinto ezihlukahlukene lapha.
Izithombe ze-Getty 15/31
Ikhanda lamathenda? Lokhu kungaba isitayela esifanele wena. Kulabo abafuna inani elincane lokungezwani kwesikhumba ngoba ubuhlungu buvele budlule ukubukeka, khetha i-faux-back faux-strand braid. Konke okudingeka ukwenze ukufaka izinwele zakho zibe yi-bun ephezulu, unamathisele i-braid yakho, ne-voilà.
Izithombe ze-Getty 16/31
ISenegal Twist Updo
Thatha indlela entsha ye-chignon ejwayelekile ngokuyifaka ngezindlela ezisontekile zaseSenegal. Yize kungabukeka kuyinkimbinkimbi, noma yini ngaphandle kwalokhu: Mane nje ubuyisele emuva ukusonteka kwakho kuponi ephezulu bese uswayipha uye kolunye uhlangothi. Uma ufuna ukuyigqokisa ngisho nangaphezulu, nikeza izesekeli zegolide noma zamatshe ayigugu isivunguvungu.
I-Instagram / @simphiwe 17/31
Izindawo Ezinamaphuzu avelele
Umbala uyindlela enhle yokunikeza ama-braids ebhokisi noma ama-faux locs akho ukubukeka okusha, kusho isazi sezinwele uCristiana Cassell, ohlanganyele nomlungisi wezinwele Sparkle ukudala izindawo ezifudumele zikaChloe Bailey. Amathoni angathathi hlangothi alungele ukuwa kepha angazanyazanyiswa kalula ezinyangeni zasebusika.
Izithombe ze-Getty 18/31
Lokhu kubukeka kuyingxube yamabili - ukusonta okuyisicaba kanye namafindo eBantu - okufakazela ukuthi ayikho enye indlela yokwenza izitayela zokuzivikela. Lokhu kubukeka kuphelele uma ungeke ukwazi ukunquma ukuthi yisiphi isitayela okufanele usithole. Ungakhetha ukusonteka okubekwe ohlangothini olunje noma ubenze baqonde emuva emuva.
Izithombe ze-Getty 19/31
Kwelukiwe Ibhokisi kwamagoda
Ungalokothi wehluleke ukufakazela ukuthi ziguquguquka kanjani, ama-braids ebhokisi akudingeki ukuthi agqoke phansi noma nge-pony. Uma ufuna ukuphakama okungeziwe, zama ukufaka ama-single wakho ku-braid strand emithathu njengo-Ayesha Curry bese uwafaka ku-sculptural ’do.
Ama-Neon Box Braids
Umbala uyindlela enhle yokunika ama-braids ebhokisi lakho noma ama-faux locs ukubukeka okusha, kusho uCassell. Faka okunye onqenqemeni ngokufaka ama-ponytails amabili ngezicucu ezishiywe ngaphambili njenge-Amandla Stenberg.
Izithombe ze-Getty 21/31
Akuzona zonke izitayela zokuzivikela ezidinga ama-braids — empeleni, lezo ezilula kakhulu ibhande eliphansi noma iponi ende. Umbhali u-Elaine Welteroth ufakazela ukuthi ukufaka inani elifanele levolumu kusisekelo sakho kungaphakamisa ibha ngokushesha kulokhu kubheka. Uyi-ponytail ejwayelekile ayisajwayelekile njalo.
Izithombe ze-Getty 22/31
Ama-Halo Braids ama-Boxed
Kwesinye isikhathi uvele ufune ukuthi izinwele zakho zikhuphuke futhi ziphume ebusweni bakho ngenkathi ubukeka umuhle ngokuzikhandla. Ukwaluka amabhokisi wama-braids ku-halo braid kukunika ukuphindeka kabili kokubukeka okuhluke ngokuphelele. Sebenzisa i-mousse yakho oyithandayo noma i-edge styler ukubeka lezo zinwele zezingane, kusho uKoudou: Lokhu kwenza njalo isitayela sezinwele sibe sihle ngokwengeziwe.
Izithombe ze-Getty 23/31
Isitayela esisodwa sokuzivikela esivame ukunganakwa i-twist enhle eyindala emibili, kusho uBrown. Kuyindlela enhle yokuthi uvikele izinwele zakho, ngenkathi uzigcina zinomswakama futhi zichaziwe. Ngenkathi uBrandy egqoke izandiso, ungakwazi ukudala kalula lokhu kubukeka ezinweleni zemvelo kuphela. Ngemuva kokukhishwa, uzosala ne-curly 'enhle ongayigqoka ngemuva kwalokho.
Izithombe ze-Getty 24/31
Okunye ukubukeka okude yiponi ephezulu. Ungayigqoka ngezintambo ezibushelelezi noma isibuko u-Issa Rae bese ufaka amagagasi athambile ukudala ubukhulu.
Izithombe ze-Getty 25/31
Ibhokisi leBlue Bun
Lapho ama-braids ethe xaxa okuhlanganayo, njengoba lokhu kufana nobhanana obusundu obusundu obubuyiselwe emuva kufakazela. Ukuze unciphise ukungezwani kwesikhumba, qiniseka ukuthi ama-braids akho awadonswa emuva aqinile kakhulu. Uzophinde ufune ukukhumbula ukungagcini i-bun up isikhathi eside futhi ushintshe ngokugqoka amabhokisi akho ebhokisi phansi phakathi ukuze unikeze ikhanda lakho ikhefu.
Okugoqiwe kweBox Braids
Ufuna ukwehlukanisa ukufana kwamabhokisi akho ebhokisi? Indlela enhle yokuvuselela izitayela ezinjengama-box braids noma ama-faux locs ihlanganisa ukwakheka, kusho uBrown. Kuyindlela emnandi yokwengeza umbala nokuguqula ukubukeka okudala kube isitayela esisha. Faka imicu embalwa yomucu omibalabala ngobukhulu obungeziwe.
Izithombe ze-Getty 27/31
Hlanganisa ama-braids ebhokisi abe yimicu emikhulu bese uwaqedela ngama-accents ambalwa ezimbali ukuze uthole isibuyekezo sesitayela esivikelayo esheshayo. Lokhu kubukeka kukufanele ukuwa, kepha uma ufuna ukukwenza kube lula kakhulu ebusika, ungashintsha izimbali zezindandatho zegolide. Ubuhle balesi sitayela ukuthi abazi mingcele.
Izithombe ze-Getty 28/31
I-Huff Buff ehlanganisiwe
Ngubani odinga ubucwebe lapho ungangeza amakhokho ezinwele ku-halo braid ephelele? Vele, ukuphindaphinda izesekeli kuhle kakhulu, isinqumo ngesakho ngokuphelele. Uma ufuna inkohliso yezinwele eziqondile noma isiphetho esihle, vele ubheke i-silkier Izinyanda zeKanekalon bese ufika ekululeni.
Izithombe ze-Getty 29/31
I-Curly ’Fro Ponytail
Lesi ngesinye sezitayela zokuzivikela ezingadingi izinwele ezingeziwe kepha zibukeka zizinhle nganoma iyiphi indlela. Kepha ngezinsuku lapho ufuna ukuthatha ikhefu kusuka kuzandiso, thatha izinwele zakho pomade bese uzixubha ngobumnene izinwele zakho phezulu nasemuva. Ungaqeda ngokubeka kahle izinwele zezingane zakho.
Sizobheka noma yisiphi isitayela sezinwele uJackie Aina azama, kepha lokhu kufakwa komqhele okuyiphutha kungumnqobi. Izandiso ze-blond zifudumeza ngokushesha ukubukeka, okungagqokwa ngokunganaki noma ukugqokiswa lezo zikhathi ezikhethekile (eziqhelelene nomphakathi). Pop in ezinye hoops mncane, futhi uyobe ukulungele ukukhonza lapho kudingeka khona.
I-Instagram / @iamaraxilindsey 31/31
Isitayela sokuzivikela esinganakwa sigqoke isikhafu, kusho uLindsey. Ukudonsela izinwele zakho emuva kwi-ponytail evulekile noma ukufaka izinwele zakho, bese ugoqa isikhafu ngesitayela se-chic, nakanjani kuyindlela elula 'yokuvikela' engagqokwa unyaka wonke. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ungashintsha kalula ukubukeka kwakho ngokudlala ngemibala ehlukene namaphethini ngokuya ngemizwa yakho.
kubiza malini ukususwa kwezinwele kwe-laser ebusweni
uyaphupha uma ushona
UJustin bieber no-selena gomez